I-BASELWORLD 2018 - Ukuhamba ngokukhululekile kunye noTshintsho lweeNkonzo zaseBasel -
Kunyaka ngamnye entwasahlobo, iBasel yindlu ngeveki kwiinkampani ze-1,800 ezibonisa ukubukela kwazo kunye neengubo kwiBaselword. Abaququzeleli bale mfuneko ebalulekileyo yezorhwebo abazange bakhononde ngokubaluleka kweendwendwe. Abathengisi be-100,000 kunye nabameli beefama zindwendwe kulindeleke ukuba baye kwiHlabathi yeHlabathi yeeWatch kunye neeJellery. Ngo-Matshi i-22, i-2018 amasango efanelekileyo aya kuvula iindwendwe.
Ngomqhubi wakho we-BASELWORD - iBhasel ye-Transfer Service
I-EuroAirport yethu yaseBasel imbalwa nje imizuzu kude nemiboniso. Kodwa ngokuqinisekileyo - njengabanye abahamba ngezoshishino - ungathanda ukutyelela umboniso wabakhiqizi iintsuku eziliqela. Ngokuphindaphindiweyo abagibeli bethu benza ubuninzi beentsuku ezinzima kunazo zonke kunyaka loshishino loshishino. Yingakho sinikela ngenkonzo yokuqhuba umqhubi wonyaka weBaselworld.
I-EuroAirport ekuqeshweni kwakho. Ukuhamba ngesitayela ngendlela I-limousine yokuqala yeklasi yeJamani kwaye ungakhathazeki malunga neendlela ezininzi okanye izithuba zokupaka kwiindawo zokubonisa. Ukongeza kwixesha lokuhamba kunye nokuhlaziywa kwabagibeli bethu, sithandwa kakhulu kubasomashishini, kuba sigcina ingqiqo xa sisenza ukuqhuba.
Dlulisa inkonzo yaseBasel kalula kwi-intanethi
Siyazi-ixesha liyimali. Yingakho simise ukubhuka kwikhompyutha sixhobo sakho. Ngehora elilodwa elihamba phambili, silungele wena njengemimousine yangasese kunye nomqhubi phambi kwehotele yakho okanye kwisikhululo-moya kwindawo yokufika nokuhamba.
Iqela leenkonzo zokuthunyelwa kweBasel likufuna unomdla wokuhlala kwiBaselworld kwaye uhlala ushishino oluhle
Kuphawulwe: I-shuttle ye-Airport Basel Baselworld Inkonzo yokudlulisa
taxi.flughafen Matshi 16, 2017 Novemba 18, 2017 Akohlulwanga Akukho gqabaza
← I-BASELWORLD 2018 - Ikulungele ukuhamba ne-Transfer Service yaseBasel
Uhambo lweSixeko kunye nokujonga indawo kunye neTransfer Service yaseBasel →